सरकारी कोटामा क्यानडा जान चाहानुहुन्छ ? छिट्टै कामदार छनोट हुँदैछ ~ FMS News Info
सरकारी कोटामा क्यानडा जान चाहानुहुन्छ ? छिट्टै कामदार छनोट हुँदैछ
काठमाडौं, भदौं ३ । मुलुकमा शैक्षिक युवा बेरोजगारको संख्या दिनानुदिन बढीरहेका बेला राम्रा भनिएका देशबाट पनि नेपाली कामदारको माग आउन थालेको छ । पछिल्लो समय मात्रै क्यानडा, ब्राजिल, जोर्डनलगायतका देशहरुबाट नेपाली कामदारको माग आएको श्रम विभागले जनाएको छ । श्रम विभागका अनुसार ती देशहरुले श्रम सम्झौता गर्न लागि नेपाल सरकारसँग पत्राचार गरेका छन् ।
यस अघि इजरायल, कोरीया लगायतका देशहरुले सरकारी कोटाबाट नेपाली कामदारहरु लगीरहेका र नेपाली कामदारहरु सबै काममा फिट हुने भएकाले पछिल्लो समय नेपाली कामदारको माग बढ्न थालेको श्रम विभागका महानिर्दैशक भरत सुवेदी बताउँछन् । यसैबिच महानिर्देशक सुवेदीले जोर्डनको टोली आज नेपाल आइपुग्ने बताए ।
क्यानडा र ब्राजिलबाट कृषिका लागि नेपाली कामदारको माग आएको र केही दिनमा नै क्यानडाको टोली पनि नेपाल आउने उनले बताए । साथै उनले समयमै ध्यान नदिदाँ न्युजिल्याण्डबाट आएको नेपाली कामदारको कोटा गुमेको समेत रहस्य खुलाए । २ सय जनाका लागि न्युजिल्याण्डले नेपाली कामदार माग गरेको थियो, म्यानपावर कम्पनीहरुले पनि त्यता ध्यान दिएनन् उनले भने सरकारी निकाय पनि मौन बस्दा कोटा गुम्यो।
इजरायलसँग कामदार लैजाने विषयमा सम्झौता भएको भन्दै उनले १ वर्षभित्र २० वटा देशसँग श्रम सम्झौता गर्ने जानकारी दिए। सरकारले गत असार २१ गतेदेखि न्युनतम लागतमा नेपाली कामदार विदेश पठाउने निर्णय लागू गरेको छ।